Dingzhou Gemlight Cutting Tools Co., Ltd., naorina tamin'ny taona 1990, dia orinasa mpamokatra fitaovana fambolena sy zaridaina maoderina, orinasa miorina ao an-tanànan'i Dingzhou, izay eo afovoan'ny faritanin'i Hebei, ny fo vy manerantany. Gemlight manokana amin'ny famolavolana sy ny famokarana fitaovana ary ny tariby meshes.
Fanandramana maherin'ny 30 taona amin'ny fitaovan'ny zaridaina, fitaovam-pambolena ary harato tariby. Miaraka amin'ny traikefa mihoatra ny 26 taona amin'ny fitaovan'ny tanimboly, ny fambolena ary ny harato tariby, ny Gemlight Cutting Tools dia namolavola tsipika famokarana mandroso manarona ny stamping, ny fitsaboana amin'ny hafanana, ny fandokoana ary ny fanangonana eo ambanin'ny tafo iray. Azontsika atao ny mifehy ny kalitaon'ny fitaovana rehetra hatramin'ny voalohany. Ny vokatray dia manana fankatoavana SGS sy intertek ho fanomezan-toky anao. ISO9001: 2015 lasa.
Fitaovana 4 tapitrisa sy harato tariby novokarina isan-taona ary amidy erak'izao tontolo izao.
Ny orinasanay 32000sqm, miaraka amina rafitra fitsaboana hafanana fanaraha-maso hafanana, ary ny milina famonoana Pneumatika, ny Gemlight dia miantoka ny fitaovana rehetra sy ny kalitaon'ny tariby-harato, ary ny fahaizan'ny famokarana fitaovana 4 tapitrisa. Azonao atao ny mahita ny fitaovanay any USA, Mexico, Kenya, Uganda ary Nizeria, Slovenia, Polonina sns. Mandritra izany fotoana izany dia omena ny tolotra ODM sy OEM hamaly ny fangatahanao sy ny fahafaham-ponao.
Fandraisana an-tserasera GLOBAL MARET
Amin'ny tsena any ampitan-dranomasina, Gemlight dia hanangana tambajotra serivisy marketing matotra any amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 100 manerantany.
Gemlight no lasa mpanondrana Machete lehibe indrindra sy fitaovana fanaovana zaridaina fambolena hafa ao Shina.
"Ny machete tena tsara. Andriamatoa John dia tsara. Faly izahay miara-miasa aminy. Tena manampy sy milamina. Maniry aho fa hanafatra kaontenera vaovao sy kalitao tena tsara. Manantena hahita fifandraisana bebe kokoa amin'ny ho avy."
"Michelle, manana sakafo vaovao momba an'i Machetes aho. Ankehitriny manana ekipa tsara kokoa ianao. John sy Amanda dia tena matihanina ary mahay. Mahatakatra ny fangatahana sy ny valiny ara-potoana izy ireo ary miaro tena. Miarahaba anao! Mazava ho azy fa tena matihanina ihany koa ianao ny vokatrao sy ny varotrao. "
"Aisy, toy ny mahazatra ny serivisy ho an'ny mpanjifanao dia tsara tokoa. Tsara be ianareo ry zalahy ary raha mila misintona ny mpitifitra ianareo dia ho antso voalohany ho anay."
Kalitao azo antoka, vidiny tsara indrindra ary fanaterana haingana!